Olee otú Gbanwee Ndi ana-akpo si Windows na ekwentị iPhone
Tupu anyị nwere ike ịgbanwee anyị kọntaktị site na Windows na ekwentị iPhone, anyị ga-akpa niile mmekọrịta niile kọntaktị na kọmputa. A bụ otú ka mmekọrịta kọntaktị site na gị Windows na ekwentị Outlook mere na anyị nwere wee bulite ndị a kọntaktị gị iPhone.
1. Nyefee Ndi ana-akpo iji Outlook na Wondershare TunesGo.
2. Otu Pịa Nyefee Ndi ana-akpo iji Wondershare Mobiletrans.
Method 1: Nyefee Ndi ana-akpo iji Outlook na Wondershare TunesGo.
Part 1. mmekọrịta kọntaktsị na Windows na ekwentị Outlook
A bụ otú ka mfe gakọrịta kọntaktị gị na gị Windows ekwentị na-ele ihe anya. Nọgidenụ na-n'uche na Windows Phone ga-eji Wi-Fi ka mmekọrịta kọntaktị gị otú ị ga-adịghị mkpa USB cables maka nke a.
Nzọụkwụ 1: Open Outlook na kọmputa gị
Ozugbo i meghere Outlook, pịa na faịlụ taabụ na enweta ma ọ bụ pịa Ama. Na ozi akaụntụ ngalaba, pịa ntọala akaụntụ na anya n'ihi na aha na akaụntụ ụdị. Ị ga-ahụ ihe dị ka nke a;
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, anyị mmekọrịta gị na kọntaktị
Na ekwentị gị, pịa mmalite na mgbe ahụ-akpali na ngwa ndepụta na pịa ntọala na mgbe ahụ Email akaụntụ. Pịa na tinye akaụntụ na mgbe ahụ na akaụntụ Microsoft ma ọ bụ Windows Live. Tinye ozi nbanye gị banye.
A bụ otú idetuo kọntaktị na-ele ihe anya n'ụzọ dị mfe;
On Outlook, pịa faịlụ, mgbe ahụ, "tinye na akaụntụ." Họrọ "Iji aka hazi nkesa ntọala ma ọ bụ ọzọ nkesa ụdị" taabụ wee pịa on Ọzọ. Dị ka nke a…
Na-esonụ window họrọ "Outlook.com ma ọ bụ mgbanwe ActiveSync dakọtara ọrụ" na mgbe pịa Ọzọ. Nke a ga-ka ị na-a window ebe ị ga-achọrọ ịbanye gị aha na email. Ozugbo i wee banye na ihe ịga nke ọma, pịa Ndị mmadụ na iji bugote kọntaktị ngalaba.
Ebe a, họrọ niile kọntaktị i ga-amasị ka mmekọrịta na ekwentị gị na ikpuru ka ọhụrụ kọntaktị ngalaba. Dị ka nke a…
Ugbu a na ekwentị gị, pịa ntọala na mgbe ahụ Email + akaụntụ
Enweta na akaụntụ Microsoft makwaara dị ka Windows Live wee pịa on mmekọrịta. Niile nke kọntaktsị na ekwentị gị kwesịrị mmekọrịta na ndị na-ele ihe anya na akaụntụ. Ugbu a, i nwere oyiri nke gị Windows Phone kọntaktsị na Outlook na ike ugbu a gaba akpali ha ka ha gị iPhone.
Part 2. Copy Ndi ana-akpo si Outlook gị iPhone
Wondershare TunesGo na-eme ka ọ dị nnọọ mfe n'ihi na ị na jikwaa kọntaktị, music, foto na ọbụna vidiyo na ekwentị gị. Nke a software-enyere onye ọrụ mfe jikwaa, bupu na mbubata niile nke data na ha na ekwentị na otu mfe click, niile na ozugbo. N'oge gara aga, na-ebufe data site na otu ekwentị ọzọ dị mgbagwoju anya usoro maka ọtụtụ ndị ma Wondershare TunesGo-enyere gị aka mfe ime nke a ọbụna ma ọ bụrụ ị na-atụle onwe gị na-erughị tech savvy. Wondershare TunesGo kwesịrị gị go- ka ngwọta mgbe ị chọrọ ndabere-elu data na ekwentị gị, mgba ọkụ ngwaọrụ ma ọ bụ ọbụna oyiri data na ekwentị gị.
Jikọọ gị iPhone gị PC site na eriri USB na ẹkedori TunesGo. Na-ekpe akara panel, họrọ "kọntaktị". Nke a kwesịrị ẹkedori kọntaktị gị management ihuenyo. Họrọ kọntaktị site na ndepụta na ị chọrọ dị na ekwentị gị wee pịa na "Export / Import" button ịhọrọ version gị Outlook. Ozugbo i mere gị oke, ị na-mere. Ugbu a kọntaktị site na gị Windows Phone nọ ugbu a gị iPhone.
Usoro 2: Otu Pịa Nyefee Ndi ana-akpo iji Wonedrshare Mobiletrans.
Nzọụkwụ 1: ndabere kọntaktị na ka OneDrive
Na mmalite ihuenyo gị Windows ekwentị, swipe we si n'elu na enweta All Settings ndabere. Banye na akaụntụ Microsoft gị wee họrọ kọntaktị na ndabere. Nọmalị ekwentị gị ga-akpaghị aka ndabere kọntaktị gị gị microsft akaụntụ.
Nzọụkwụ 2: Sign na OneDrive na jikọọ na iPhone
Mgbe emeghe Wondershare Mobiletrans na kọmputa gị, biko họrọ Weghachi si Backups, bulie OneDrive si nhọrọ, mgbe ahụ, banye na gị OneDrive akaụntụ. Jikọọ gị iPhone na kọmputa, Mobiletrans ga-amata ya dị ka lekwasịrị ekwentị na-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 3: Malite Nyefee
Mgbe ị banye na anyị OneDrive akaụntụ, usoro ihe omume ga-agụ kọntaktị site na OneDrive. Dị nnọọ pịa Malite Nyefee, usoro ihe omume ga-agafeta niile kọntaktị gị gị iPhone ngwa ngwa.
Nke iPhone ị na-eji?
Apple e atọhapụ a ọhụrụ version nke iPhone ọ bụla ohere ha ga-esi dị ka anyị nile na-agbalị ịnọgide na-ọhụrụ upgrades dị na ọhụrụ iPhone ntọhapụ. Nke onye ị na-eji? Lelee ndị na-esonụ dị iche iche iPhones na ha Njirimara. Ònye maara na ọ pụrụ ịbụ oge maka obere nweta nkwalite.
1. The iPhone 4: The iPhone 4 nwere mgbanwe dị onwe ya mgbe ọ na-mbụ wee pụta. Ọ na-abịa a retina ngosi nke nwere 326 pikselụ kwa anụ ọhịa. Nke a pụtara na ihuenyo si mkpebi bụ 960 site 640 pikselụ. Ọ nwere 32GB esịtidem ebe nchekwa na a 5 megapixel igwefoto na nwere backside illuminator. Ọ na-nwere na wuru video edezi ike na-enye ohere ọrụ ịkọrọ ha video kpọmkwem online. Ọ bụkwa nke mbụ nke iPhones ka okporo mmiri OS na-aga iOS.
2. The iPhone 5: Nke a na ekwentị na-abịa na ihe kwalite 1136 site 640 mkpebi. Ọ na-emekwa photos anya mma karịa ha ga na iPhone 4 nanị n'ihi na aka sensọ na-ike n'ime iko ka megide n'okpuru ya. Ọ na-eji kwalite iOs6 na 16GB ka 64GB esịtidem ebe nchekwa. Ọ nwere ihe abụọ ese foto; a n'azụ 8 megapixel igwefoto na emewo flash na a n'ihu 1.2 megapixel igwefoto.
3. The iPhone 5s: Nke a onye nwere a yiri na ihuenyo mkpebi ka iPhone 5. Ọ na-abịa na a wuru na ebe nchekwa nke 64GBand a batrị okwu oge nke ruo 10 aka elekere. Ọ nwere ihe abụọ ese foto; a n'ihu 1.2 megapixel na a n'azụ 8 megapixel igwefoto. Ma eleghị anya, ihe na-eme ka iPhone 5s ubé mma karịa iPhone 5 bụ touchID mkpisiaka onye nnyocha.
4. The iPhone 6: na iPhone 6, Apple wee thinner. Ọ bụ otu n'ime ndị thinnest handsets na ahịa. Ya na ihuenyo mkpebi e kwalite ka 1334 site 750 na Ọ nwere ihe esịtidem ebe nchekwa nke ruo 128GB (dabere na nke onye ị na-ahọrọ.) Ya igwefoto nwere 8MP mmetụta na 1.2 megapixel igwefoto na-ewe ezi HD photos.
5. The iPhone 6 Plus: Nke a otu ọzọ bụ nke a Phablet karịa ka ọ dị a ekwentị. Nke a 5.5 anụ ọhịa ekwentị na-abịa na 1GB nke Ram na 8MP n'azụ ihu ese foto. Na iPhone 6 Plus ị ga-esi na-ahọrọ si 16GB version, na 32GB version, na 64GB version ma ọ bụ 128GB version (dabere na gị n'akpa uwe, n'ezie.) Ọ nwere zuru HD 1920 site 1080 ngosi. Nke a na ekwentị na-eji kwalite iOS 8.1.1 nke nwere niile nchinchi ahụmahụ na aga na nsụgharị ofu.
Ihe ọ bụla version ị ugbu a nwere, ị nwere ike ugbu a mfe nyefee kọntaktị site na a Windows Phone na iPhone. iPhones bụ ma ama maka ha sleek imewe na ịrịba arụmọrụ ọ bụ ezie na e nwere mma igwe si n'ebe; mkpesa nke iPhone dị nnọọ jụ pụọ. N'ezie ọ bụ nchebe ịkọ na e nwere ike ịbụ ihe iPhone 7 na-abịa si nnọọ anya. Ya mere mgbe a ohere.
Olee otú tinye music ka Windows Media Player?
> Resource> Windows> Olee ka ịgbanwee Ndi ana-akpo si Windows na ekwentị iPhone